Muuri News Network » SAWIRO: Caruur dowladda ka soo furatay Shabaab oo ku dayacan Xerada Xalane Muqdisho…
SAWIRO: Caruur dowladda ka soo furatay Shabaab oo ku dayacan Xerada Xalane Muqdisho…
Hawlgal ciidamada dowladda Federalka Somaliya ay ku qaadeen 19-kii Bishan deegaanka Jiliyaale ee Gobolka Shabellaha Dhexe, ayaa waxaa lagu soo furtay caruur dowladda ay sheegtay in Shabaab ay tababarayeen.
Wasiirka Warfaafinta Somaliya C/raxmaan Yariisow, ayaa Warbaahinta u sheegay in dowladda Somaliya hawlgalkaasi qorsheysan ay ku soo furatay 30 caruur ah oo Shabaab tababar ay siinayeen.
Caruurtaasi qaarkood oo la geeyay Xarunta ciidamada Amisom ee Xalane, ayaa xilligan waxaa lagu soo waramayaa inay haysato xaalado dhanka caafimaadka iyo daryeel la’aan.
Dhalinyaro ka mid ah kuwa ku nool Muqdisho oo xarunta Xalane ku booqatay caruurtaasi ayaa waxa ay sheegeen inay soo arkeen qaarkood oo xaaladooda caafimaad ay liidato, nabaro kala duwana jirkooda uu ka muuqdo.
Dhalinyaradii soo arkay caruurtaasi ayaa waxa ay sheegeen inay u muuqato dowladda laamaheeda ku shaqada leh arrimahan inay iska ilowday oo markii hawlgalka lagu soo furtay caruurtaasi la geeyay Xerada Xalane, kadibna la isaga tagay.
Deegaanka Jiliyaale oo ka tirsan Gobolka Shabellaha dhexe, Jowharna u jira 30-KM ayaa laga soo furtay caruurtaan goob dowladda ay sheegtay Shabaab inay ku tababarayeen ilmahan si ay u baraan habka dagaalka.